Misaona an’ilay mpampianatra ambony, Benedict Anderson, ilay nanao izay ivoahan’ny fandripahana ny komonista tamin’ny 1965 ho fanta-bahoaka, i Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2015 5:52 GMT
Nodimandry tamin'ny 12 Desambra 2015 tao an-tanàna Indoneziana ao Malang, Atsinanan'i Java ny profesora Benedict Anderson, mpanoratra ny boky “Imagined Communities” (Fiarahamonina Nosaintsainina) sy manam-pahaizana momba ny Azia Atsimo-atsinanana ao amin'ny Oniversite Cornell.
Ao Indonezia, malaza noho izy mpiara-manoratra lahatsoratra nihantsy ny fitantaran'ny governemanta momba ny vono olona faobe tamin'ny taona 1965 i Anderson. Ny taratasin'i Cornell tamin'ny 1971, mitondra ny lohateny hoe “Fanadihadiana santatra momba ny Fanonganam-panjakana tao Indonezia tamin'ny 1 Oktobra 1965,” no namoaka ny filazana diso nataon'ny “Holafitra Vaovao” an'i Suharto tamin'ny nahatonga ny fandripahana faobe tanatin'ny ra mandriaka ireo Komonista teo anelanelan'ny taona 1965 sy 1966. Nahazo tsiny tamin'i Suharto ho nanao fanonganam-panjakana tsy nahomby ny komonista, ka izany no nolazainy nahatonga ny tafika hanafay tanteraka. Voalaza fa olona atsasaky ny tapitrisa ny namoy ny ainy tamin'ny fandripahana, izay ahiahiana fa mpanohana ny komonista ny ankamaroan'izy ireo.
Tamin'ny antsafa vao haingana niarahana tamin'ny “Gazetiboky Loka” (Gazetiboky Manerantany), niresaka momba ny tantaram-piainany hivoaka atsy ho atsy, ny fomba fijeriny momba ny tanora Indoneziana, sy ny heviny momba ny fianarana Indoneziana i Anderson.
Nanoratra tantaram-piainan’ ny maty, mitondra ny lohateny hoe “Mas Ben” (Rahalahy Ben), midera ny firehetam-po, ny fikirizana, sy ny fankamamiana fatratra ananan”ity mpampianatra ambony ity amin'ny tolon'i Indonezia hijoro ho firenena iray ilay Indoneziana mpanoratra antsoina hoe Goenawan Mohamad.